Ku xayeysiiso Sumaddaada Shirarka adigoo isticmaalaya Maqaarka Laptob | Martech Zone
Ku xayaysiiso Sumaddaada Shirarka adigoo adeegsanaya Maqaarka Laptob
Khamiista, Noofembar 19, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markii iigu horreysay ee aan arko maqaar qabow oo laptop-ka ah, waxay ahayd Jason Bean's astaan ​​bnpositive ah oo maqaar saaran laptop-kiisa. Waxay ka dhigeysaa inuu ka dhex muuqdo badweynta laptop-yada oo laga arki karo qolka shirarka oo dhan.
Waxaan go aansaday inaan uqaabeeyo maqaarkayga MacBookPro waxaanan dhex maray mareegaha intarnetka kahor intaanan helin mid si fudud loo isticmaali karo oo si buuxda loo habeyn karo. Goobta aan go aansaday waxay ahayd Maqaarka. Isku xirka qaabeynta maqaarka wuxuu ahaa mid aad u fudud oo la isticmaali karo, waxaadna siineysaa nambarka nambarka kumbuyuutarkaaga gacanta si markaas uu u noqdo mid si sax ah loo qiyaasay oo xitaa astaanta astaanta u ah.
Tayada maqaarka ka dhasha waa wax layaableh… waa waana mid qaro weyn oo xoqan xoq. Waxaan helayaa hadalo badan oo waaweyn oo ku saabsan sida ay u egtahay quruxdeeda waana jeclahay xaqiiqda ah inay kobcineyso sumadeyda. Ereygeyga digniinta ah: hubso inaad soo dejiso sawir xallin sare leh. Maqaarkaygu waa yaryahay, laakiin sifiican ayuu u shaqeeyaa maadama ay u egtahay wax farshaxan ah. Waxaan sidoo kale ku darey magacayga twitter-ka si dadka waawayn ay u helaan oo ay dhakhso iila socdaan.
Waxaan la yaabanahay in aanan arkin noocyo badan oo waaweyn oo siiya ka soo qayb galayaashooda maqaar laptop ah. Sidee ayey u fiicnaan laheyd in lagu dhex socdo hoolka shirarka ee farsamada isla markaana si dhakhso leh loo aqoonsado Google, Microsoft iyo shaqaalaha kale! Aad ayey uga fududdahay isku dayga inaad ku aqriso magacooda shirkad calaamad qoorta u sudhan!
Tags: faallooyinka bloggudbinta galkacinwaanada tagsrobots.txturl
Xaddiga Macluumaadka Webka 2.0
Nov 20, 2009 at 3: 10 AM
Waad ku mahadsantahay tixraacyada maqaarkayga laptop-ka ee MyTego.com. Waan ku raacsanahay faallooyinka xallinta sare. Hel gabi ahaanba nooca ugu sarreeya ee garaafkaaga ee aad heli karto. Sidoo kale waad ku saxan tahay inaad ka dhex muuqato dad badan, ka dib dhan, Chris Brogan ayaa igu soocay BlogINDIANA sanadkii la soo dhaafay maqaarkayga laptop-ka.
Nov 20, 2009 saacadu markay tahay 12:21 PM
Helitaanka meel cusub oo lagu xayeysiiyo astaantaada waxay lamid tahay helitaanka jiis badan oo pizza ah - marwalba waxaad heleysaa meel kale oo aad ka buuxiso. Farriin weyn.
Noocyada Cool ee Ingiriiska
Nov 23, 2009 at 4: 43 AM
Tani waa fikrad aad u fiican, Doug! Waxaan doonayaa inaan helo maqaar loogu talagalay laptop-kayga 🙂
Nov 23, 2009 at 6: 07 AM
Mahadsanid Michael! Waxaad haysaa summad aad u wanaagsan (oo waad jeceshahay kaararka cusub!) - tani macno ayey leedahay!
May 14, 2012 at 1: 39 PM
Waxaan raadinayay isla wixii saxda ahaa ee Maqaarka Laptop-ka La-habeeyay, laakiin Hindiya gudaheeda, maadaama maqaarku si aad ah iiga qaadi doono maraakiibta haddii aan ku jirin sheyga laftiisa, sidaa darteed waxaan doortay inaan wax ka doorto gudaha.
Raadis ayaa lagu sameeyay waxaana laga helay theskinmantra.com iyo inkfruit.com, halka inkfruit waxba kama habeyn gabi ahaanba, wiilasha theskinmantra ayaa sameeyay waana wiil u gaarka ah amaahda laptop-kayga layaabka leh amazing
Ma jiro wax isdabamarin toos ah oo khadka tooska ah oo internetka ah sida kan maqaarka, laakiin waxaan si fudud ugu diri karnaa sawirka ragga oo iyagu waxay sameeyaan maqaarka laptop-ka. Maahan kan ugu casrisan, laakiin wax walba waa la cafiyey ka dib markii aan helay laptop-ka….
cna waxaan ku dhajinayaa iskuxiraha sawirka laptop-kayga, waan jeclahay inaan muujiyo 🙂 🙂
May 14, 2012 at 4: 51 PM
Haa, waa inaad awoodid inaad kudariso sawir haddii aad tahay isticmaale Disqus diiwaangashan. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko!
Agoosto 22, 2012 saacaddu markay ahayd 10:36 PM
Mid ka mid ah sababaha aan u jeclahay maqaarka maqaarka waa in, inta ay qaadato xoogaa muruq ah, ay la soo baxaan iyagoo aan lahayn wax haraaga ah. Cajiib!